Chineke zuru ike n’ụbọchị nke asaa (1-3)
Jehova Chineke, Onye kere eluigwe na ụwa (4)
Nwoke na nwaanyị bi n’Iden (5-25)
E ji ájá kpụọ mmadụ (7)
Osisi ịma ihe ọma na ihe ọjọọ (15-17)
Chineke kere nwaanyị (18-25)
2 Otú ahụ ka e si kechaa eluigwe na ụwa na ihe niile dị na ha.+ 2 Mgbe ọ na-eru ụbọchị nke asaa, Chineke arụchaala ọrụ ọ nọ na-arụ. O wee malite izu ike n’ụbọchị nke asaa mgbe ọ rụchara ọrụ niile ọ nọ na-arụ.+ 3 Chineke wee gọzie ụbọchị nke asaa ma kwuo na ọ dị nsọ n’ihi na ọ bụ n’ụbọchị ahụ ka Chineke nọ na-ezu ike mgbe o kechara ihe niile o zubere ike. 4 Ihe a bụ akụkọ otú e si kee eluigwe na ụwa n’oge e kere ha, n’ụbọchị Jehova* Chineke kere eluigwe na ụwa.+ 5 Osisi adịbeghị n’ụwa, ahịhịa amalitebeghịkwa ipu n’ala n’ihi na Jehova Chineke emebeghị ka mmiri zoo n’ụwa. E nwebeghịkwa mmadụ ga na-akọ ihe n’ala. 6 Ma alụlụụ na-esi n’ụwa akwụgo elu, ọ na-edekwa ala niile mmiri. 7 Jehova Chineke wee jiri ájá si n’ala kpụọ mmadụ+ ma kunye ume ndụ+ n’imi ya, mmadụ ahụ wee ghọọ onye* dị ndụ.+ 8 Jehova Chineke kụkwara ubi n’Iden,+ n’ebe ọwụwa anyanwụ. Ọ bụ n’ebe ahụ ka o mere ka mmadụ ahụ o kere biri.+ 9 Jehova Chineke wee mee ka osisi ọ bụla nke dị mma ile anya, nke mkpụrụ ya dịkwa mma oriri, puo n’ala. O mekwara ka osisi nke ndụ+ na osisi ịma ihe ọma na ihe ọjọọ+ puo n’etiti ubi ahụ. 10 E nwere osimiri si n’Iden na-asọpụta ma na-ede ubi ahụ mmiri. Osimiri a kewara ghọọ osimiri anọ.* 11 Aha osimiri nke mbụ bụ Paịshọn. Ọ bụ ya gbara ala Havila niile gburugburu, bụ́ ebe e nwere ọlaedo. 12 Ọlaedo dị n’ala ahụ bụ ezigbo ọlaedo. Eso* deliọm na nkume ọnịks dịkwa na ya. 13 Aha osimiri nke abụọ bụ Gaịhọn. Ọ bụ ya gbara ala Kush niile gburugburu. 14 Aha osimiri nke atọ bụ Hidekel.*+ Ọ bụ ya na-asọga n’ebe ọwụwa anyanwụ Asiria.+ Osimiri nke anọ bụ Yufretis.+ 15 Jehova Chineke kpọọrọ nwoke ahụ mee ka o biri n’ogige Iden ka ọ na-akọ ihe na ya ma na-elekọta ya.+ 16 Jehova Chineke nyekwara nwoke ahụ iwu, sị: “I nwere ike iri mkpụrụ nke osisi ọ bụla dị n’ubi a rijuo afọ.+ 17 Ma erila mkpụrụ si n’osisi ịma ihe ọma na ihe ọjọọ, n’ihi na ị ga-anwụrịrị n’ụbọchị i riri mkpụrụ si na ya.”+ 18 Jehova Chineke wee sị: “Ọ dịghị mma ka nwoke a nọrọ naanị ya. M ga-enye ya onye inyeaka, ka ọ bụrụ onye ga-eme ka o zuo ezuo.”+ 19 Jehova Chineke ejirila ájá kpụọ anụ ọhịa ọ bụla na anụ ndị na-efegharị n’eluigwe. O wee malite ime ka ha na-abịakwute nwoke ahụ ka ọ mara aha ọ ga-akpọ nke ọ bụla. Ihe ọ bụla nwoke ahụ kpọrọ anụ nke ọ bụla,* ya abụrụ aha ya.+ 20 Nwoke ahụ wee gụọ anụ ụlọ niile na anụ ndị na-efegharị n’eluigwe na anụ ọhịa ọ bụla aha. Ma nwoke ahụ enweghị onye inyeaka ga-eme ka o zuo ezuo. 21 N’ihi ya, Jehova Chineke mere ka oké ụra buru nwoke ahụ. Ka ọ nọ na-ehi ụra, Chineke wepụtara otu n’ime ọgịrịga ya ma mechie ebe o si wepụta ya. 22 Jehova Chineke wee jiri ọgịrịga ahụ o wepụtara n’ahụ́ nwoke ahụ kpụọ nwaanyị ma kpọtara ya nwoke ahụ.+ 23 Nwoke ahụ wee sị: “Ehee! Onye a bụ ọkpụkpụ si n’ọkpụkpụ mNa anụ ahụ́ si n’anụ ahụ́ m. A ga-akpọ ya NwaanyịN’ihi na e ji ihe si n’ahụ́ nwoke kpụọ ya.”+ 24 Ọ bụ ya mere nwoke ga-eji hapụ nne ya na nna ya ma rapara n’ahụ́ nwunye ya,* ha abụrụzie otu anụ ahụ́.+ 25 Ha abụọ wee gbara ọtọ,+ nwoke ahụ na nwunye ya. Ma ihere anaghị eme ha.
^ Ebe a bụ ebe mbụ aha Chineke bụ́ יהוה (YHWH) gbara na Baịbụl. Aha a mere ka Chineke dị iche na chi ndị ọzọ. Gụọ A4.
^ Ma ọ bụ “mkpụrụ obi.” N’asụsụ Hibru, ne′phesh. Ọ pụtara “ihe na-eku ume.” Gụọ Nkọwa Okwu.
^ Na Hibru, “isi anọ.”
^ Ma ọ bụ “Taịgris.”
^ Ma ọ bụ “mkpụrụ obi nke ọ bụla dị ndụ.”
^ Ma ọ bụ “ya na nwunye ya anọgide.”